एक नेपाली बराबर ३६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ अर्थ एक नेपाली बराबर ३६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण
एक नेपाली बराबर ३६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण
२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । चालु आवको पहिलो तीन महिना १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढ्दा कुल ऋण ११ खर्ब नजिक पुगेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३१.३२ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३१.३२ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋणमध्ये विदेशी ऋण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १८.२३ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३.०९ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । अघिल्लो आवको अन्तिम (असार २०७६) सम्म सार्वजनिक ऋण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३०.०६ प्रतिशत रहेको थियो ।
कहाँबाट कति ऋण ?
तीन महिनाको अवधिमा नेपालले सबैभन्दा बढी ऋण विश्व बैंकबाट लिएको छ । विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एशोसिएन (आइडीए)बाट ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको हो ।
एसियाली विकास बैंकबाट ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । द्विपक्षीय मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट २ अर्ब ३३ करोड ९१ लाख ऋण प्राप्त भएको छ ।
· विश्व बैंक स् ११ अर्ब ८७ करोड/ एसियाली विकास बैंक ६ अर्ब २१ करोड/भारत २ अर्ब ३३ करोड ९१ लाख/जापान १ अर्ब ४४ करोड १६ लाख/ चीन ९० करोड ८८ लाख/कोरिया स् २९ करोड ७९ लाख/साउदी अरेबिया स् ५ करोड २२ लाख
नेपालले तीन महिनाको अवधिमै साढे ६ अर्ब ऋण तिरेको छ । महालेखाको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा बाह्य ऋण २ अर्ब ७२ करोड ६६ लाख र आन्तरिक ऋण ३ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ घटाइएको हो ।
अनुदान समेत बढ्यो
सरकारलाई विभिन्न निकायले दिने अनुदानमा समेत उल्लेख वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तीन महिनामा सरकारले ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
यस्तो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १२३.४ प्रतिशतले धेरै हो । उक्त आवको तीन महिनामा ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो । यस अवधिमा १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको छ ।
Previous articleडा. गोविन्द केसीको अवस्था जटिल
Next articleर्‍यापर समिर घिसिङ ‘भिटेन’को स्वर रहेको चलचित्र ‘सरौतो’को प्रोमोसनल गीत सार्वजनिक